Vaovao momba ny iPhone | IPhone News (Pejy 12)
Ny Spotify dia tara any aoriana any Etazonia hoy ny CIRP
75 tapitrisa amin'ireo mpisera Spotify mavitrika 170 tapitrisa dia mpamandrika premium. Saika 45% amin'ireo mpampiasa manerantany no mandoa.
Apple dia afaka mifehy ny famahanana haingana ny iPhones amin'ny taona 2018, ary zavatra tsara izany
Ny tsaho dia nilaza fa afaka mifehy charger haingana ho an'ny iPhone i Apple mitaky ny fanamarinana azy ireo hiasa amin'ny 100%
eBay dia hanohana ny Apple Pay amin'ny faran'ity taona ity
Tsikelikely, Apple Pay dia nanjary iray amin'ireo sehatra ampiasaina indrindra ho toy ny fomba fandoavam-bola amin'ny andavanandrom-piainan'ny mpampiasa maro, noho ny pejy lavanty eBay, vao avy nanambara izy fa hanome fanampiana ho an'ny Apple Pay ao amin'ny ny faran'ity taona ity, na dia any Etazonia ihany amin'izao fotoana izao.
Philips dia mamoaka vokatra Hue ivelany vaovao
Philips dia nanangana vokatra vaovao ao amin'ny Hue range toy ny strip LED sy matanjaka sy miasa tanteraka.
Raha tsy misy ny AirPower dia mamoaka ny solony manokana i Samsung
Raha tsy misy ny AirPower dia te hanararaotra ny fisintomana i Samsung ary handefa ny kinikany manokana, ny Wireless Charger.
Ny fivoaran'ny lalao video, ny lanjany ara-toekarena ary ny fidiran'ny OMS
Nanambara ny OMS fa ny aretina amin'ny lalao video dia aretina vaovao tafiditra ao amin'ny katalaogin'ny aretina iraisam-pirenena. Ahoana no ahafahana ajanona?
Herintaona fanampiny BOE Technology Group, voatendry ho mpamatsy ny tontolon'ny OLED ho an'ny Apple
Mety ho toy ny vaovao miverimberina ity ary tamin'ny taon-dasa tamin'ny faran'ny volana novambra koa dia nisy resaka ...
Ny fahasalaman'ny bateria amin'ny iOS, izay rehetra tokony ho fantatrao momba azy
Tianay ny manampy anao hahafantatra bebe kokoa momba ny foto-kevitra momba ny fahasalamana bateria ao amin'ny iOS, izay rehetra tafiditra ao anatin'izany ary inona no eritreretin'ny fiantohana.
Fanaparitahana ny fividianana iTunes hosoka any amin'ny firenena Aziatika
Any Singapour, fiampangana hosoka maro no voatatitra amin'ny kaonty iTunes mitentina euro an-jatony.
Ny HomePod dia hanana fanohanana amin'ny antso sy fiasa hafa amin'ny iOS 12
Ny HomePod dia mety misy fiasa vaovao manaitaitra amin'ity fararano ity miaraka amin'ny fanombohana ny iOS 12, toy ny fahaizana manao antso.
Izahay dia nanandrana ny angovo headphones 2 an'ny Headphones XNUMX vaovao
Izahay dia nanandrana ny angovo Headphones2 an'ny angovo vaovao, headphone ho an'ny ankamaroan'ny tanàn-dehibe izay hahatonga anao handeha amin'ny lamaody amin'izao fotoana izao.
Ed Sheeran's New Documentary 'Songwriter' Tonga any Apple Music amin'ny Aogositra
Ilay mpanakanto malaza Ed Sheeran dia nanambara ny fahatongavan'ilay mpamorona horonantsary fanadihadiana azy irery tamin'ny sehatra Apple Music nandritra ny volana Aogositra.
Eo am-pelatanan'ny orinasa iray fehezin'ny governemanta ny angona iCloud an'ny mpampiasa sinoa ankehitriny
Volana vitsivitsy lasa izay, nanako vaovao izahay, izay nanambarana azy, ary nanamafy i Apple, fa ny angon-drakitra rehetra ampiasain'ny mpampiasa mampiasa Privacy iCloud amin'ny zavatra izay tsy lasa zava-misy ho an'ny mpampiasa sinoa, ka ny tsy fahampiana Izany dia nitsahatra tsy nampatahotra azy ireo.
Spotify dia maniry ny hananganan'ny mpanakanto ny hirany manokana
Spotify dia mangataka mpitendry mozika handefa ny hiran'izy ireo amin'ny ekipa fampandrosoana Playlist Recommended mba hamafy araka izay tratra.
Apple dia manala ny sokajy Doorbell amin'ny lisitry ny kojakoja HomeKit
Ny lehilahy Cupertino dia manapa-kevitra ny hiverina amin'ny alàlan'ny fanesorana ny sokajy Ringtones amin'ny lisitry ny fitaovana mifanaraka amin'ny HomeKit.
Mitentina 5.000 miliara dolara ny fomba fanao ratsy nataon'i Google
Ny Vondrona eropeana dia niafara tamin'ny fametrahana lamandy tamin'i Google izay nihoatra ny 5.000 tapitrisa dolara noho ny fomba fanao ampihimamba.
Corning dia manolotra Gorilla Glass 6, ilay vera matanjaka indrindra namboarina hatrizay
Corning dia manolotra Gorilla Glass 6, fanontana tsy azo tohaina indrindra noforonina ary afaka mametraka ny iPhone vaovao kasaina hatao amin'ny faran'ny taona 2018.
Ireo no bug vaovao sy ireo izay mandeha ao amin'ny iOS 12 beta 4
Ny lesoka voalohany voavaha ary tsy isalasalana fa hanome fahafaham-po ireo mpampiasa maro dia io no misakana ny fifaliana marina an'ny Fortnite.
36% amin'ireo finday avo lenta rehetra navitrika tao amin'ny Q2 dia iPhones
Apple dia nanatsara ny angon-drakitra momba ny finday avo lenta navadika nandritra ny Q2 2018. Nahatratra 36% ny iPhone, raha oharina amin'ny 36% izay finday Samsung.
Efa misy ny beta ampahibemaso fahatelo an'ny iOS 12
Andro iray taorian'ny nanombohany ny beta fahefatra ho an'ny mpamorona iOS 12, nanangana ny orinasa Cupertino, ny kinova mifandraika amin'ny beta 12 ho an'ny daholobe iOS XNUMX dia azon'ny mpampiasa rehetra tafiditra ao anatin'ny programa beta an'ny Manzana.
Ny fehezan-kira Sonos Beam dia misy amin'ny vidiny 449 euro
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia namoaka lahatsoratra iray izahay izay nanehoanay anao ny vokatra farany natolotry ny orinasa Sonos, bara azo amidy ho an'ny fahitalavitra The Sonos Beam ho an'ny fahitalavitra azo amidy any Espana izao amin'ny vidiny 449 euro.
Mophie dia mandefa batterie ivelany vaovao miaraka amin'ny port Lightning sy ny fanamarinana MFi
Ilay marika malaza ho an'ny iDevices Mophie, dia namoaka bateria ivelany vaovao ho an'ny iDevices miaraka amin'ny port Lightning.
Ny fampidirana amin'ny haavo teknolojia dia mety ho azo atao ihany koa: Emojis
Apple dia mandinika ny antsipiriany rehetra. Ho fankalazana ny Andro eran-tany ho an'ny Emoji dia nasongadiny ny fahatongavan'ireo emotikon vaovao 70 mahery ho an'ny iOS 12.
Tonga ny Betas 4 an'ny iOS 12, tvOS 12 ary watchOS 5
Apple dia namoaka ny Beta fahefatra an'ny iOS 12 ary koa ny Betas an'ny watchOS 5 sy tvOS 12 mifanitsy aminy, izay ampiana amin'ny macOS Mojave natomboka omaly.
Veloma ry Cydia!: Nanambara ny fampidirana mpitantana vaovao antsoina hoe Sileo i Electra
CoolStar, "lehiben'ny masinina" an'ny Electra, dia nanambara fa hijanona tsy hametraka an'i Cydia intsony izy ireo hanomboka hametraka mpitantana vaovao antsoina hoe Sileo
Ho fankalazana ny Andro Emoji, Apple dia nanova ny tabilaony iray manontolo ho Memojis
Mankalaza ny Andro eran-tany ho an'ny Emoji i Apple, nanapa-kevitra ny hanova ny tabilaony manontolo ho Memojis mahatsikaiky ao amin'ny tranonkalan'ny orinasa.
LG dia nanao fifanarahana tamin'i Apple hanome efijery OLED sy LCD
Samsung dia nanana ny voninahitra, niantso azy io ho zavatra, satria izy no mpamorona ny efijery voalohany amin'ny iPhone miaraka amin'ny haitao OLED. Ny maodelin'ny iPhone manaraka, dia toa tsy vitan'ny takelaka Samsung OLED fotsiny izy io, fa LG kosa dia ho mpamatsy iray hafa, na dia amin'ny ambaratonga kely kokoa aza.
Instapaper, lasa mahaleo tena ary tsy anisan'ny Pinterest intsony
Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny Instapaper dia nanjary niaraka tamin'i Pocket, serivisy roa lehibe hitahirizana rohy ary hahafahany mamaky azy ireo ivelan'ny Internet. manomboka miasa tsy miankina, toy ny niandohany.
BBVA sy BancaMarch dia misy amin'ny Apple Pay izao
Apple sy BBVA dia nanetsika ny serivisy Apple Pay noho ny karany. BBVA no banky espaniola lehibe mbola tsy nanatevin-daharana.
Apple dia manafoana ny serivisiny fanontana sary ary mamporisika antsika hampiasa serivisy antoko fahatelo
Nanapa-kevitra ny hanafoana ny serivisiny fanontana sary i Apple noho ny fampiasana ambany ary mamporisika anay hampiasa serivisy an'ny antoko fahatelo.
Apple manavao ny tahiry Eurasia ary manamafy iPhone vaovao telo
Ireo isa izay mifanitsy amin'ireo fitaovana Apple vaovao dia nohavaozina ao amin'ny tahiry Eurasia mba hanamafisana fa hiaraka amin'ny iOS 12 izy ireo.
Nahazo ny laharana voalohany tao amin'ny App Store i YouTube Music tamin'ny fitarainana maro
Ny kalitaon'ny mozika, ny famerenana amin'ny laoniny ary ny fametrahana ny vola amin'ny sehatra dia nahatonga ireo mpampiasa hitaraina.
Ny tolotra tsara indrindra amin'ny Amazon Prime Day 2018 (Nohavaozina ny 17 Jolay)
Ny varotra Amazon Prime Day tsara indrindra ho an'ireo tia teknolojia. Aza adala mitady ary jereo ny safidinay.
Carpool Karaoke: Nahazo fanendrena loka Emmy ny andiany
Ny seho James Corden eo ambanin'ny batisan'ny Apple Music, Carpook Karaoke: The Series, dia notendrena ho Emmy avy amin'ny American Academy
Apple mankalaza ny lalao famaranana amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny tranokalan'ny finalists
Ny tranokalan'i Kroasia sy i Frantsa dia nohavaozina tamina horonantsary kely manamarina fa tafiditra amin'ny famaranana amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany izay hifarana anio.
Adobe Photoshop dia nanamafy fa hamely iPads amin'ny taona 2019
Tao amin'ny famelabelarana Adobe MAX dia hitantsika ny fandrosoana voalohany an'ny Adobe Photoshop amin'ny iPad izay ho tonga amin'ny fomba ofisialy amin'ny 2019.
Khal Drogo (Jason Momoa) avy amin'ny Game of Thrones dia hamokatra Apple
Ny mety hahatongavan'ilay angano Khal Drogo angano avy amin'ny Game of Thrones (Jason Momoa) mankany amin'ny serivisy streaming video Apple manaraka dia voasivana.
Tsy hohidiana adaladala intsony ny iPhone-nao raha manoratra "Taiwan" ianao
Apple dia nanamboatra ny lesoka kaody izay nanakana ny terminal rehefa nitendry ny teny "Taiwan" ianao.
Sonos sy AirPlay 2: ny fomba fanavaozana sy ny fanovana ireo mpandahateny
Ny fanavaozana Sonos nandrasana hatry ny ela ho an'ny AirPlay 2 mifanentana dia efa misy ary hazavainay ny fomba fametrahana azy sy ny fiovan'ny Sonos anao
Apple nahazo ny dokambarotra tsara indrindra amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny taona 2018 any Russia miaraka amin'ny AirPods
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia nahavita ny marika hita be indrindra nandritra ny fiadiana ny amboara eran-tany tany Russia nefa tsy mpanohana noho ny AirPods an'ny mpilalao baolina kitra.
Ahoana ny fomba hitantanana fampandrenesana natambatra iOS 12
Hasehonay aminao ny fomba fitantanana ny rafitra fampandrenesana voasokajy ao amin'ny iOS 12. Amin'izany fomba izany dia hahafahanao mampifanaraka azy amin'ny tsiro sy ny filanao.
WWDC 2018 Workshop Transcripts Azo alaina izao
Ny transcripts an'ireo horonantsary rehetra tamin'ny atrikasa izay natao nandritra ny WWDC farany teo dia azo jerena ao amin'ny tranokalan'ny Apple.
Mikasa ny hamorona fampiharana iOS ho an'ny serivisiny amin'ny serivisy sy fandaharana amin'ny fahitalavitra i Microsoft
Afaka nandefa fampiharana ny serivisy Film & TV an'ny Microsoft izy mba hahafahan'ny mpampiasa iOS mankafy ny atiny novidiny tamin'ny Windows.
Tsy hividy teny 1pass i Apple
Toa vonona ny hanolotra kaonty 1password ho an'ny mpiasany rehetra i Apple. Saingy nolavina ny tsaho momba ny fividianany.
Apple dia mpiara-miasa amin'i Disney hampiroborobo ny fampielezan-kevitra #DreamBigPrincess
Ny zazalahy Cupertino dia miray amin'ny Disney indray miloka amin'ny fampielezan-kevitra manohana ny talenta vehivavy audiovisual.
iOS 11.4 dia mandany ny baterinao iPhone amin'ny fomba feno habibiana
Mitohy ny fifanolanana, ny kinova farany an'ny iOS, toy ny iOS 11.4, dia miteraka fitarainana marobe momba ny fahaleovan-tenany.
Natakaliko finday Android 50 € ny iPhone X ary izao no vokany
Izany no mitranga rehefa hatakalon'ny mpampiasa iPhone X ny finday avo lenta amin'ny fitaovana Android izay 50 euro fotsiny ny vidiny.
Recoverit, ny vahaolana tsara indrindra hamerenana ireo rakitra voafafa
Raha nijanona tsy niasa ny karatra fitadidiantsika, kapila mafy, tsorakazo USB ... ary tianay ny mahazo ireo rakitra ao anatiny, miaraka amin'ny Recoverit dia azo atao.
Apple nandefa 'Memory', toerana vaovao hampiroborobo ny Face ID an'ny iPhone X
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia maniry ny hanohy hampiroborobo ny Face ID an'ny iPhone X amin'ny fomba voalohany indrindra miaraka amin'ny toerana Memory vaovao.
Ny sary famantarana Apple, ilay tantara mahafinaritra ary ny tena tantara
Ny anton'ny tantara maro sy ny angano an-tanàn-dehibe, ny niandohan'ny sary famantarana Apple dia tsy izay ananan'ny maro, na izay tadiavin'ny maro.
Apple Music dia misongona an'i Spotify any Etazonia
Apple Music dia tokony ho nihoatra ny mpanjifa 20 tapitrisa tany Etazonia, mialoha ny Spotify ao amin'ny firenena Amerika Avaratra.
Electra iOS 11.3.1 jailbreak misy izao ofisialy
Nohavaozina ny tranokala ofisialy CoolStar ary manana ny jailbreak Electra iOS 11.3.1 izahay izao, izay ahafahanao manenjika ny iOS 11.2-11.3.1.
Ny mpandalina dia miloka amin'ireo lente telo rehetra amin'ny iPhone
Ny mpandinika dia saika mahazo antoka fa ny orinasa Cupertino dia manomana fantsom-piaramanidina misy solomaso telo sy fahaiza-manao manokana.
Electra jailbreak fanavaozana ho an'ny iOS 11.3.1 dia ho tonga afaka andro vitsivitsy
CoolStar dia nanambara tamin'ny alàlan'ny kaonty Twitter azy fa vitsy sisa ny andro sisa mandra-pahatongan'ny famoahana ofisialy ny fanavaozana ny Electra ho an'ny iOS 11.3.1.
Sygic dia manamafy ny fahatongavany ao amin'ny CarPlay miaraka amin'ny iOS 12
Ny fampiharana fitetezana GPS, Sygic, dia mandroso mampiseho ny fomba fiasan'izy io amin'ny Apple CarPlay sy iOS 12 vaovao.
Apple dia misoratra anarana iPads sy Macs vaovao miaraka amin'ny Vaomieran'ny Toekarena Eurasia
Apple dia nanoratra modely iPad sy Mac vaovao niaraka tamin'ny Vaomieran'ny Toekarena Eurasia, fisoratana anarana ilaina hahafahana mivarotra izany any Rosia sy ny manodidina.
Ireo no bug izay namboarin'ny iOS 12 beta 3
Izahay dia mizaha toetra ny iOS 12 mba hilaza aminao mialoha ny tombotsoany, ary indrindra ny lesoka fahita indrindra.
Ny iOS App Store dia mbola mahazo tombony bebe kokoa
Ny iOS App Store dia mbola mahasoa kokoa noho ny fifaninanana, Google Play Store, hany ka tafakatra avo telo heny noho izany.
Mizara kaonty Netflix amin'ny namanao ve ianao? Netflix dia te hampiakatra ny vidin'ny sokajy 'Premium'
Manoloana ny fandraisana tsara ny drafitry ny vidin'ny fitaovana marobe, Netflix izao dia te-hampitombo ny drafitra ahafahan'ny fitaovana efatra.
Ny jailbreak CoolStar ho an'ny iOS 11.3.1 dia hampiditra sivana tweaks tsy tohanana
Ny jailbreak ho an'ny iOS 11.3.1 izay havoakan'ny mpijirika CoolStar dia hanasongadina ilay nantsoiny hoe Repo-unclutter, mpamoaka fikafika mifanaraka aminy.
Ny 31 jolay kosa ny valim-bola ara-bola amin'ny telovolana fahatelo
Amin'ny 31 Jolay dia hanambara amin'ny haino aman-jery ny vokatra ara-toekarena i Apple amin'ny telovolana fahatelo amin'ny taona.
MediaTek dia mety ho mpamatsy ireo chips 5G an'ny iPhone manaraka
Ny orinasan-tserasera Aziatika MediaTek, izay raha ny tsiliantsofina farany dia hikarakara ny fanamboarana ny HomePod sy ny mpikirakira azy ...
Google mamela ny hafa hamaky ny mailaka Gmail-nao
Tatitra iray vaovao ao amin'ny Wall Street Journal no nilaza fa mamela ny orinasa hiditra amin'ny mailaky ny mpampiasa Gmail azy i Google.
Ny GarageBand dia nohavaozina ary manohana ny kilasy (Asam-pianarana) izao
Ny rindranasa farany navaozina hanohanana ny asan-tsekoly dia ny Apple's GarageBand.
Bankia sy Sabadell dia efa mifanaraka amin'ny Apple Pay!
Nandritra ny ora vitsivitsy, ny mpampiasa rehetra izay manana carte de crédit sy debit avy amin'ny Banc Sabadell sy Bankia, efa ...
Vondrona iray tokan-tena tonga amin'ny WhatsApp amin'ny fanavaozana farany
Ankehitriny WhatsApp dia mamela ny famoronana vondrona tokana izay mpitantana irery no mahay manoratra.
Iovine sy Dr. Dre dia nanery handoa vola 25 tapitrisa dolara ho an'ny famolavolana ny Beats
Ireo mpanorina ny Beats Electronics dia nasaina nandoa $ 25 tapitrisa tamin'i Steve Lamar, izay nandray anjara tamin'ny famolavolana ny Beats Studio tany am-boalohany
Ireo no fiasa vaovao amin'ny protokol WPA3 izay havoaka amin'ny 2019
Ny protokolovan'ny fiarovana amin'ny fampifandraisana ireo fitaovana amin'ny tamba-jotra Wi-Fi dia antsoina hoe WPA3 ary hahita ny hazavan'ny andro amin'ny taona 2019, miaraka amina endrika fiarovana vaovao maro.
Ity dia mety ho ny charger USB-C 18W izay hamidy Apple
Ny charger USB-C aseho amin'ny voninkazo dia mety ho adapter 18W izay kasain'i Apple atomboka tsy ho ela.
iOS 11 Mbola Velona: Apple Nanafaka ny iOS 5 Beta 11.4.1
Apple dia manohy manatsara ny iOS 11 sy macOS High Sierra amin'ny famoahana ny beta fahadimy amin'ny iOS 11.4.1 sy macOS 10.13.6 ho an'ny mpamorona androany.
Ny iPhone 2018 dia mety hanana RAM 4GB
Amin'ity vanim-potoana fahavaratra ity, ireo solventsa vaovao izay hasehon'i Apple, azo vinavinaina, amin'ny volana septambra, dia efa tokony ho ao anatin'ny dingana farany amin'ny fitsapana.
Drake mamaky firaketana mahatratra 170 tapitrisa ny fahitana an'i Scorpion ao amin'ny Apple Music
Drake mpanakanto fanta-daza mamaky firaketana amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny angon-drakitra rakikira vaovao Scorpion raha oharina amin'ilay taloha.
Ireo no vinavinan'i Ming-Chi Kuo amin'ny vokatra vaovaon'i Apple
Ming-Chi Kuo dia namokatra andiana faminaniana momba ny vokatra vaovaon'i Apple amin'ny faran'ny taona sy ny fiandohan'ny taona manaraka.
LG dia mandeha indray ho mpanamboatra efijery ho an'ny iPhone
Manakaiky ny fanombohana vaovao dia manondro indray ny LG ho mpanamboatra ny efijery amin'ny ho avy iPhone miaraka amin'ny haitao OLED ny mpandalina.
Laharana famaranana: Apple sy Samsung dia nahavita fifanarahana momba ny patanty
Fito taona ireo orinasa roa ireo dia niditra tamina raharaham-pitsarana ary toa tsy lavitra ny ...
Alto's Odyssey amidy mandritra ny fotoana voafetra
Alto's Odyssey dia hita ao amin'ny Stor Econ App amin'ny fihenam-bidy mahaliana 60% amin'ny vidiny tany am-boalohany, saingy maharitra fotoana fohy izany.
Logitech Slim Combo sy Slim Folio, efa mifanentana amin'ny iPad 2018
Logitech dia nanolotra ny kinova fanavaozana ny Smart Combo sy Smart Folio, kitendry roa mifanaraka amin'ny iPad 2017 sy 2018
Instagram dia manolotra sticker amin'ny mozika hanampianay ny tantarantsika
Ankehitriny izahay dia afaka manampy mozika amin'ny tantaranay Instagram miaraka amin'ny fahatongavan'ireo stickers mozika vaovao natombok'i Instagram.
Hevitra mahaliana iPad Pro miaraka amin'ny bezels mihena sy zoro efijery boribory
Asehonay aminao ny hevitra vaovao momba ny iPad Pro 11,9-inch, miaraka amina frame mihena ary mitovy habe amin'ny maodely 10,5-inch
Nohavaozina ny telegram ary mamela antsika hanisy marika ny hafatry ny vondrona iray rehefa novakiana
Ny fanavaozana Telegram farany dia mamela antsika hanisy marika haingana ireo hafatra mbola tsy voavaky mivantana avy ao amin'ny efi-tserasera, tsy hiditra ao anatiny
Apple dia afaka nandefa andian-tantara, mozika ary drafitra vaovao amin'ny famandrihana tokana
Apple dia afaka nandefa famandrihana indray mandeha ho an'ny fahitalavitra, mozika ary serivisim-baovao miaraka amin'ny sarany isam-bolana
Elgato dia nomena anarana hoe Eve System ary mivarotra ny fizarana «kilalao»
Elgato dia antsoina hoe Eve System ankehitriny ary ny fanovana anarana dia mitaky ny fivarotana ny fizarana "lalao".
Manana fantsona YouTube virtoaly virtoaly ve ianao? Apple dia manao sonia ireo talenta ireo
Ny zava-misy virtoaly dia mitohy ho fomba mahaliana ho an'ny Apple hizaha ary izany ankoatry ny zava-misy mitombo ...
Instagram dia manolotra ireo antso an-tsarimihetsika vondrona vaovao amin'ny fampiharana azy
Ny Instagram dia nanamboatra endrika ny fizarana fizahana azy ary nampiditra antso an-tsary amin'ny Direct, ka tsy voatery hiankina amin'ny fampiharana hafa ny mpampiasa.
Apple's Schoolwork dia misy amin'ny fomba ofisialy
Azo ampiasaina ny sekoly sy ny mpampianatra handaminana amin'ny alàlan'ny fitaovana iOS.
Playz, ilay rindranasa vaovao hidirana amin'ny atin'ny platform rehetra
Playz no fampiharana vaovao hahafahana mankafy ny atin'ny sehatra iray manontolo amin'ny iPhone sy iPad anao na aiza na aiza
Spark dia nohavaozina miaraka amin'ny ady amin'ny fanatsarana ary vaovao vitsivitsy
Spark, iray amin'ireo mpitantana mailaka malaza indrindra miaraka amin'ny vaovao ary indrindra ny fanatsarana maro.
Nahatratra an'i Apple ho marika sarobidy indrindra i Amazon
Ilay goavambe amin'ny varotra amin'ny Internet, Amazon, no orinasa amerikana sarobidy indrindra, mihoatra ny Apple sy Google matanjaka rehetra milatsaka toerana 2.
Fivorian'ny fivondronan'ny teknolojia lehibe hamahana ny olan'ny tsiambaratelo
Hihaona amin'ny alarobia ho avy izao ireo orinasan-teknolojia lehibe hiresaka olana lehibe iray tato anatin'ny volana vitsivitsy: fiainana manokana momba ny mpampiasa.
Doka veloma, Microsoft Edge ho an'ny iOS dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fanampiana Adblock Plus
Ireo tovolahy ao amin'ny Microsoft dia manampy ny Adblocker Plus tena mahaliana amin'ny Microsoft Edge ho an'ny iOS mba hanadinoantsika ireo doka amin'ny Internet.
IPhone Error 53 dia mitentina 9 tapitrisa $ amin'ny Apple any Australia
Ny hetahetan'ny Apple amin'ny fampidirana rindrambaiko manakana ny fanovana natao tamina atrikasa tsy nahazoana alàlana dia nandoa onitra 9 tapitrisa Aostralianina.
Ny fanokafana sy fanombohana ny fiaranao amin'ny iPhone dia manakaiky ny zava-misy
Andiana famaritana vaovao no navoaka momba ny rafitra nomerika nomerika ho an'ny finday avo lenta izay ananan'i Apple.
Izy ireo dia mampiseho ny fomba hamohana iPhone amin'ny kaody amin'ny alàlan'ny herisetra
Mpanadihady iray momba ny fiarovana no naneho fa mahavita mamoha iPhone misy kaody amin'ny alàlan'ny rafitra mahery vaika izy.
Ity dia mety ho ilay iPhone SE mora vidy izay hasehon'i Apple amin'ity taona 2018 ity
Hitanay indray ny tsaho momba ny iPhone SE manaraka, ny iPhone mora vidy an'ny Apple izay ho tonga miaraka amin'ny 6.1 santimetatra, ary ny marika malaza amin'ny iPhone X.
Amazon dia mandefa ny serivisy famakiana ankizy Amazon FreeTime Unlimited ao amin'ny iOS
Ny zalahy ao Amazon dia sahy mandefa ny katalaogin'ny atiny ho an'ny ankizy, Amazon FreeTime Unlimited, amin'ny iOS hidirana amin'ny iDevice.
Podcast 9 × 36: Famaranana amin'ny vanim-potoana
Izahay dia mamarana ny vanim-potoana amin'ny fizarana farany izay handinihantsika izay rehetra nitranga tamin'ity taona ity, ny tsara indrindra sy ny ratsy indrindra amin'ny Apple
Foxconn dia hanokatra ny fotodrafitrasa voalohany any Etazonia
Hatramin'ny naha-filoham-pirenena an'i Donald Trump dia nandalo fanjakana maro ny fifandraisana Apple sy Foxconn noho ny ...
Ankoatry ny tsaho: Apple dia tsy hampivondrona iOS amin'ny macOS
Apple dia tsy hampivondrona ny iOS amin'ny macOS, fa hanampy ny mpamorona handefa ny fampiharana iOS ho programa macOS miaraka amina tetikasa iray amin'ny taona ho avy.
Ny ankizy mampiasa headphone dia mety hijaly noho ny fahaverezan'ny fihainoana
Ny ankizy mampiasa headphone dia ahiana ho very fihainoana kokoa noho ireo tsy mampiasa azy matetika.
Ireo mpandahateny mahay dia mbola tsy tafiditra amin'ny HomeKit
Ny fandinihana farany dia mampiseho fa ny 6% -n'ireo mpampiasa mpandahateny mahay fotsiny no manararaotra azy ireo hitantana ny rafitra automatique an-trano.
Ny fampiharana Walkie-Talkie vaovao dia tonga amin'ny Apple Watch miaraka amin'ny watchOS 5 Beta 2
Ny fanombohana ny beta faharoa an'ny watchOS 5 dia mitondra antsika ny fampiharana Walkie-Talkie nandrasana hatry ny ela izay manova ny Apple Watch ho Walkie-Talkie
Ny fanovana rehetra avy amin'ny iOS 12 Beta 2
Apple dia namoaka ny iOS 12 Beta 2 ary asehonay anao ny fanovana sy ny fanatsarana rehetra nampiharina tamin'ity fanavaozana vaovao ity ho an'ny iPhone sy iPad
HBO dia miomana handefa ny lalao ofisialy Westworld ho an'ny iOS
Tsy ampoizina ny HBO amin'ny alàlan'ny fandefasana ny lalao ofisialy Westworld ho an'ny iOS, lalao iray izay hakananay ny fibaikoana sy ny fitantanana ny valan-javaboary malaza Westworld.
Imaginbank sy Bankia dia nohavaozina miaraka amin'ny vaovao manandanja
Jereo miaraka aminay ny fanavaozana naterak'ireo fanavaozana farany avy amin'ny ImaginBank sy Bankia.
iOS dia handefa ny toerana amin'ny antso mankany amin'ny 911 avy any Etazonia
Ity fanampiana manan-danja ity dia hanampy amin'ny fanatsarana ny fiarovana sy ny fahafaha-manafaka famonjena ho an'ireo olona tandindomin-doza.
Ahoana no fomba hanomezan'ny Apple ny atiny audiovisual voalohany?
Afaka nanolotra ny atiny audiovisual tany am-boalohany tamin'ny fomba roa i Apple: amin'ny famandrihana misaraka na amin'ny amboara miaraka amin'ny serivisy hafa toa ny Apple Music.
Apple manitatra ny isan'ny mpitantana ny serivisy horonantsary mivantana
Ny orinasa any Cupertino dia nanakarama an'i Kelly Costello handray an-tanana ny orinasa manerantany ho an'ny sehatra fandefasana horonantsary an'i Apple.
Izahay dia nanandrana ny Xtorm SolarBooster, mampiasa angovo azo avy amin'ny masoandro hamenoana ny fitaovanao
Izahay dia nisedra ny fiasan'ny tontolon'ny masoandro Xtorm SolarBooster, iray amin'ireo safidy tsara indrindra hanararaotana ny tara-masoandro sy hampangana ireo iDevices.
Apple dia manakarama ny iray amin'ireo lohan'ny rafitra mitondra fiara mahaleo tena Google antsoina hoe Waymo
Tao anatin'izay taona faramparany izay dia fantatry ny orinasa Cupertino fa tsy afaka manohy miaina ny fiankinan-doha amin'ny iPhone, a ...
Apple manavao ny faritra ho an'ny kaomandy an-tserasera amin'ny tranokala ofisialiny
Ny paoma lehibe dia nanavao ny tranokala ofisialiny ahafahantsika mitantana ny baiko an-tserasera amin'ny sary lehibe kokoa ary endrika maoderina kokoa.
watchOS 5 dia hamela fampiharana Podcasts ho an'ny Apple Watch
Miaraka amin'ny watchOS 5 Apple dia nanome ny mpamorona fahaiza-manao mamorona fampiharana podcast miasa tanteraka amin'ny Apple Watch.
"Welcome HomePod" dia nahazo loka tamin'ny dokambarotra tsara indrindra
Spike Jonze dia talen'ny "Welcome HomePod", doka Apple izay nahazo loka ara-barotra tsara indrindra.
Manatevin-daharana an'i Apple i Oprah Winfrey hamorona fandaharana amin'ny fahitalavitra
Ny mpampiantrano fahitalavitra Oprah Winfrey dia nanao sonia ny amin'ny serivisy video streaming an'i Apple.
Nilaza i Tim Cook fa ny asa mipetraka no "homamiadana vaovao"
Ny mpiasan'ny Apple Park dia tsy maintsy miasa mijoro mandritra ny fotoana fohy hipetrahana, amin'ity fomba ity dia mino i Tim Cook fa manatsara ny kalitaon'ny fiainany.
Apple dia nanao sonia an'i Aaron Paul (Breaking Bad) ho an'ny andiany Matory ve ianao?
Matory ve ianao? dia hanana ny iray amin'ireo mpilalao avy amin'ny Breaking Bad Aaron Paul amin'ny mpiasa ao aminy.
Miverina miloka amin'ny Mac miaraka amin'ny toerana vaovao i Apple
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia manao doka momba ny fomba famoronan'ny mpampiasa Mac zavatra mahavariana amin'ny macs.
Jailbreak IOS 11.4 amin'ny horonan-tsary miaraka amin'i Cydia mandeha
Ny zava-drehetra dia toa manondro fa ny jailbreak ho an'ny iOS 11.4 dia mety ho eo akaiky eo, raha mizara ny fitrandrahana nampiasaina ny mpikaroka fiarovana
Ny fanavaozana farany ny Google Maps dia manamboatra ny olana amin'ny iOS 12
Taorian'ny fanavaozana farany azy dia namaha ny olan'ny toerana misy ny GPS ny Google Maps ary mifanaraka tanteraka amin'ny iOS 12 ao amin'ny beta voalohany.
watchOS 5 dia mamela anao hametraka ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny Wi-Fi
Amin'ny watchOS 5 dia manana toerana ho an'ny vaovao amin'ny watchOS 5 koa isika, izay manampy ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny Wi-Fi ankehitriny.
Fornite ho an'ny iOS dia mahavita misambotra mpampiasa maherin'ny 125 tapitrisa
Ny Epic Games dia nanambara ny fahatongavan'ireo mpilalao 125 tapitrisa ao Fortnite. Ankoatr'izay dia nanambara ny fiadiana ny amboara eran-tany Fortnite izy ireo.
Apple dia manampy an'i Siri sy ny serivisiny nomerika rehetra
Apple dia nanararaotra indray ny fankalazana ny fiadiana ny amboara eran-tany manaraka amin'ny alàlan'ny fanampiana atiny manokana ho an'i Siri sy ireo serivisy nomerika.
Ireo no fanitsakitsahana nataon'i Apple ao amin'ny fampiharana Books ho an'ny iOS 12
Handeha hitsidika kely ny vaovao rehetra izay entin'ny Boky ao amin'ny iOS 12 izahay ary ambonin'izany dia miresaka kely momba ny tena dikan'izy ireo.
Apple dia hanaisotra ny rindranasa ao amin'ny App Store izay mangataka fidirana amin'ny fifandraisana
Hentitra ny tenin'i Apple momba an'io raharaha io, esoriny ao amin'ny App Store ireo rindranasa izay mampiasa fampiasana tsy ilaina amin'ny fidirana amin'ny fifandraisana.
Nomad dia manolotra batterie portable 2.800 mAh hiampangana iPhone
Ny mpanamboatra bateria azo entina Nomad dia manolotra bateria azo averina ampiasaina mba hamenoana ny iPhone amin'ny tariby taratra mifangaro
Gaga i Microsoft ary handefa ny Gears of War for iPhone ho an'ny iPhone
Gaga ireo tovolahy avy amin'ny Microsoft tamin'ny E3 tamin'ny nanolorany Gears of War ho an'ireo fitaovana finday nolalaovin'ireo olo-malaza POP, Gears POP!
Fanambarana vaovao amin'ny fizarana iray hafa amin'ny Carpool Karaoke
Apple dia namoaka horonantsary ora vitsy lasa izay miaraka amina fizarana vaovao hafa amin'ny andiany Carpool Karaoke fanta-daza. Amin'ireto fizarana ireto izay ...
Sonos Beam, bara fanamafisam-peo miaraka amin'i Alexa sy AirPlay 2
Ny orinasa dia manohy manolotra fisehoan-javatra vaovao toy ny bara fanamafisam-peo vaovao izay mampifandray ny Alexa sy AirPlay 2, ny Sonos Beam ve, ilay tsara indrindra eny an-tsena?
Apple dia mitandrina, ny orinasa tsy mahomby amin'ny 20% amin'ity taona ity
Apple dia mitandrina ary manapa-kevitra ny hanao fampisehoana 20% latsaka noho ny tamin'ny taon-dasa manodidina ny fotoana mba tsy hamaivanina loatra ny famokarana.
Fantatr'i LaLiga fa mitsikilo anao ny App ofisialiny
Ireo tovolahy avy ao LaLiga dia manaiky fa mampiasa ny fampiharana ofisialy ho an'ny finday izy ireo mba hanangonana vaovao momba ireo bara tsy mandoa fahazoan-dàlana.
Apple dia mandefa indray ny watchOS 5 Beta 1
Herinandro taty aoriana dia natombok'i Apple indray ny Beta voalohany an'ny watchOS 5 miaraka amin'ireo zava-baovao rehetra ao aminy toa ny fampiharana Podcasts na ny asan'ny Walkie Talkie
iOS 12 dia mamela anao hampiasa ilay mpisafidy fitendry marina amin'ny fitaovana tsy misy 3D Touch
Azo atao izao noho ny iOS 12 hampiasa ilay misafidy fitendry mazava tsara na dia amin'ireo rafitra tsy manana teknolojia 3D Touch aza.
Ny iOS 12 dia mamela anao hanidy ireo fampiharana multitasking amin'ny iPhone X amin'ny alàlan'ny fikororohana, toy ny amin'ny fitaovana hafa
Ny multitasking amin'ny iPhone X dia nisy tsy nitovizany tamin'ny fitaovana iOS hafa. Miaraka amin'ny iOS 12 Apple dia nanova izany.
tvOS 12 dia mamela anao hiditra teny miafina avy amin'ny iPhone
Ny zava-baovao amin'ny tvOS 12 dia ny ahafahantsika mampiditra tenimiafina ao amin'ny iPhone ary noho izany dia manadino ny fitendry virtoaly an'ny Apple TV.
Tsaho voalohany amin'ny Apple Watch manaraka, tsy misy bokotra ara-batana intsony
Manaraka ny dian'ny iPhone 7, ny tsaho voalohany dia milaza fa ny Apple Watch manaraka dia handao ny bokotra ara-batana hanome lalana ny bokotra mafy orina.
Ny rakikira farany nataon'i Shawn Mendes dia Apple Music nohenoina indrindra tamin'ny 2018
Shawn Mendes dia namoaka ny anaram-boninahiny farany herinandro vitsy lasa izay. Amin'ity fotoana fohy ity dia nanjary rakikira nihainoana indrindra tamin'ny taona 2018 tao amin'ny Apple Music.
Raha tsy misy vaovao ao amin'ny AirPods, Apple dia mandefa loko vaovao ho an'ny Beats Solo3 sy Powerbeats 3
Raha tsy misy manantena azy dia manavao ny elanelan-doko amin'ny Beats Solo3 Wireless sy Powerbeats3 Wireless i Apple mba hahafahantsika mangatsiaka indrindra amin'ny fahavaratra.
iOS 12 dia mampandeha ny fidirana amin'ny alàlan'ny USB raha tsy voasokatra ao anatin'ny adiny iray ny iPhone
iOS 12 dia mamela antsika hanafoana ny fifandraisana amin'ny iPhone amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny tselatra, hisorohana ireo fitaovana toa ny GrayKey tsy hiditra amin'ny terminal.
Microsoft mividy ny sehatra GitHub amin'ny $ 7.500 miliara
Ny sehatra fitehirizana be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, GitHub, dia nanjary ampahany tamin'ny Microsoft goavambe taorian'ny nandoavana 7.500 miliara dolara.
Tonga ny kinova fitsapana ho an'ny fampiharana rehetra ao amin'ny App Store
Apple dia manavao ny torolàlana amin'ny fampiasana ny App Store mamela ny mpandraharaha rehetra hanolotra vanim-potoana fitsapana ny fampiharana azy ireo hahafahanay mizaha toetra azy ireo tsy misy fetrany alohan'ny handehanana amin'ny fizahana.
Apple dia nanala ny beta voalohany an'ny watchOS 5 noho ny olana mandritra ny fametrahana azy
Noterena hisintona ny beta voalohany an'ny WatchOS 5 ny orinasa monina ao Cupertino, noho ny olana atrehiny rehefa mametraka amin'ny fitaovana mifanaraka aminy.
Avereno atao ny WWDC 2018 ary zahao ny vaovao ao amin'ny tranokalan'ny Apple
Raha tsy nanana fotoana hahitana ny fehezanteny WWDC 2018 amin'ny Alatsinainy ianao dia efa manana fotoana hamelomana azy io amin'ny tranokala Apple ofisialy.
Apple Music dia mamela anao hahita mozika amin'ny tonony ao amin'ny iOS 12
Ao amin'ny beta voalohany an'ny iOS 12 ho an'ny mpamorona dia azo atao ny mahita ny hiran'ny Apple Music amin'ny tononkiran'izy ireo. Io dia hahafahantsika mahita andianteny tokana ho an'ireo hira rehetra fantatray fa tsy ny anarany feno.
WWDC 2018 azo alaina ao amin'ny YouTube izao
Ny horonantsary tamin'ny fihaonambe fanokafana ny WWDC 2018, izay natao ny alatsinainy 4 jona, dia azo jerena ao amin'ny YouTube izao.
watchOS 5 dia tsy mifanaraka amin'ny Apple Watch voalohany
Ny Apple generasi voalohany dia tsy hifanaraka amin'ny watchOS 5. Nanamafy izany ny Apple tamin'ny tranokalan'ny tompon'andraikitra taorian'ny WWDC 2018.
Face ID ao amin'ny iOS 12 dia ahafahanao misoratra anarana endrika faharoa fa tsy tarehy faharoa
Fampisehoana vaovao ao amin'ny iOs 12 mamela anao hisoratra anarana fisehoana hafa ho an'ny Face ID, fa tsy manampy tarehy faharoa hanalana ilay fitaovana.
Ireo no Mac izay mifanaraka amin'ny macOS Mojave
Ity ny lisitry ny Mac izay eken'ny macOS Mojave taorian'ny fanambarana nataony tao amin'ny WWDC 2018 nitranga omaly. Mac Mac mifanentana amin'ny High Sierra no mandatsaka ny lisitra Mojave.
Podcast 9 × 34: iOS 12 sy maro hafa
Aorian'ilay lahateny fanolorana dia mamakafaka ireo vaovao rehetra nasehon'i Apple anay tao amin'ny WWDC18 izahay, ary ny iOS 12 no lohalaharana
Miaraka amin'ny fahitana ny iPad manaraka tsy misy frame, ny iOS 12 dia hitondra ny fihetsiky ny iPhone X amin'ny iPad
Ny iOS 12 dia manolotra fihetsiketsehana vaovao ao amin'ny iPads azontsika tamin'ny fihetsika vaovao izay nentin'ny iPhone X noho ny fanafoanana ireo frame sy ny fampidirana ny notch.
Ireo no fampiharana mandresy amin'ny Apple Design Awards 2018
Ireto ny fampiharana folo izay natolotr'i Apple tamin'ny Apple Design Awards 2018 tamin'ny fivoriana voalohany an'ny WWDC. Ny mpamorona azy dia mitondra fonosana paoma lehibe iray fonosana.
macOS Mojave: ny vaovao tsy azonao adino
Ny rafitra fiasa vaovao an'ny Mac dia antsoina hoe macOS Mojave. Apple dia nanandrana nanamboatra endrika sasany tanjaka amin'ny rafitra ary manome fiarovana bebe kokoa amin'ny angon-drakitra mpampiasa.
Ny vaovao rehetra ao amin'ny iOS 12
Raha te hahalala ny vaovao rehetra ianao izay ho avy amin'ny tanan'ny iOS 12, etsy ambany dia asehonay anao ny vaovao lehibe izay avy amin'ny tanan'ny kinova farany an'ny iOS 12 amin'ny volana septambra.
Ny trano dia tonga amin'ny Mac miaraka amin'ny macOS Mojave
Ary farany, ny automatisation an'i Apple ao an-trano dia tonga amin'ny Mac, izay ahafahantsika mifehy ny tranonay amin'ny alàlan'ny app Home vaovao ho an'ny macOS.
Ny vaovao rehetra ao amin'ny watchOS 5
Apple dia namoaka ny watchOS 5 ho an'ny Apple Watch ao amin'ny WWDC ary izany rehetra izany no vaovao ho entin'ny fanavaozana.
Apple TV 4K dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fanampiana Dolby Atmos
Ny fahafaha-mamorona feo manodidina miaraka amin'ny Apple TV dia tonga noho ny fahatongavan'ny teknolojia Dolby Atmos ho an'ny Apple TV.
Tonga ao amin'ny Apple Watch ihany ny Apple Podcasts
Apple dia nanapa-kevitra ny hanampy ny fampiharana Podcast takiana amin'ny Apple Watch, tsy mampiasa ny iPhone intsony mba hilalaovana Podcast malalantsika.
MeMoji, mivadika Animoji noho ny iOS 12 vaovao
iOS 12 dia hamela antsika ho tonga Animoji antsika manokana noho ny toetra MeMoji vaovao, sarimiaina miaraka amin'ny fisehoantsika.
Google Maps dia tonga ao amin'ny CarPlay miaraka amin'ny iOS 12
Apple dia nanolotra ny iOS 12 ao amin'ny WWDC ary feno vaovao momba ity rafitra fikirakirana iPhone vaovao ity, ...
iOS 12 no mitondra antsika Aza manelingelina raha matory aho
Ny maody Do Not Disturb dia havaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny mety hametrahantsika azy araka ny ora fatoriantsika mandeha ho azy.
Tonga ny hitsin-dàlana Siri, ny fahaizana mampifandray ireo rindranasa amin'ireo andian-teny prefixed
Siri dia nihalehibe tamin'ny iOS 12 mamela antsika hamonjy hitsin-dàlana amin'ny alàlan'ny andian-teny mba hampahatsiahivin'i Siri amintsika ny vaovao voatahiry.
Mandrefy, fampiharana vaovao an'ny Apple handrefesana
Vao avy namoaka rindrambaiko vaovao ho an'ny iOS 12 i Apple, ao amin'ny WWDC. Mampanantena ny handrefesana ny tontolo manodidina antsika amin'ny fomba tsotra sy azo antoka ny fampiharana.
iOS 12 dia hifanaraka amin'ireo fitaovana mitovy amin'ny iOS 11
Eny, ny iOS 12 vaovao dia hifanaraka amin'ireo fitaovana rehetra nifanaraka tamin'ny iOS 11, ny rafitra fiasa izay mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fitaovana.
Ireto misy sasany amin'ireo emotika vaovao izay ho tonga amin'ny faran'ity taona ity amin'ny iPhone
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny fampiasana ny emotika dia nanjary be loatra noho io ...
Apple dia miasa amin'ny mpilalao Internet izay ahafahantsika miditra amin'ny kaonty Apple Music misy antsika nefa tsy mila mampiasa iTunes amin'ny fotoana rehetra, raha eo amin'ny Mac-nay isika.
Ora vitsy aorian'ny WWDC dia miverina miaraka amin'ny toerana hafa miaraka amin'ny Karaoke Animoji i Apple
Ny milina fivarotana an'i Apple dia manomboka manafana ora maro aorian'ny WWDC manaraka Keynote fanokafana miaraka amin'ny toerana vaovao misy ny Animoji ho mpitolona.
Araho ny fampisehoana ny iOS 12 mivantana amin'ny Actualidad iPhone
Apple dia manolotra antsika amin'ity alatsinainy ity ny iOS 12 vaovao miaraka amin'ireo ambiny fanavaozana ho an'ny fitaovany rehetra ao amin'ny WWDC 2018 ary holazainay aminao ny zava-drehetra velona. Araho eto izany.
Telegram manomboka manavao taorian'ny fanakanana an'i Apple noho ny fangatahana Rosiana
Telegram, serivisy fandefasan-kafatra eo no ho eo, dia nosakanana ny fanavaozana ny App Store noho ny olana amin'ny governemanta rosiana nangataka ny lakilen'ny famoahana ny resaka momba ny serivisy.
CoolStar dia hanavao ny Electra mankany amin'ny jailbreak mankany amin'ny iOS 11.3.1
Ny jailbreak ho an'ny iOS 11.3.1 dia akaiky kokoa noho ny eritreretintsika. Taorian'ny fanambarana ny fanararaotana vaovao nataon'i Ian Beer, ny hacker CoolStar dia nanome toky fa hanavao ny fitaovany Electra izy mba hametrahana Cydia.
Apple hanitatra ny fahaizan'i Siri amin'ny WWDC
Ao amin'ny WWDC 2018 dia hahita fanatsarana tsy mampino amin'ny mpanampy virtoaly an'i Apple isika: Siri. Manantena ny hahita ny fampidirana mpanampy amin'ny mpandahateny Beats, ny fanatsarana ny resadresaka mpanampy ary ny fanatsarana ny HomePod.
Mpandahateny mifanentana amin'ny AirPlay 2
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia namela fizarana vaovao tao amin'ny tranonkalany, izay ahitanay ny maodely rehetra izay mifanaraka amin'ny AirPlay 2.
Ankehitriny dia azonao atao ny mahazo ireo toby fiampangana finday vaovao avy any Belkin
Belking dia miandrandra ny mety hisian'ny Apple AirPower amin'ny alàlan'ny fandefasana docka sy cradle tsy misy tariby ho an'ny iPhone 8 sy iPhone X.
Apple dia manomboka mandoko ny San José Convention Center ho an'ny WWDC
Ny Big Apple dia nametaka ny fitaovam-piadiana haingon-trano manontolo tao amin'ny McEnery Convention Center any San José, izay hisy ny WWDC 2018. Ny Alatsinainy ho avy izao dia ho fantatsika ny vaovao rehetra momba ny rafitra fiasan'izy ireo.
Eve Aqua sy Eve Flare, ny farany avy amin'ny elgato ho an'ny HomeKit
Elgato dia manolotra kojakoja roa vaovao ho an'ny HomeKit: Eve Aqua, hifehezana ny fanondrahana sy Eve Flare, jiro baolina.
Ny Firefox dia mamela antsika misintona karazana atiny rehetra ary mizara izany amin'ny fampiharana hafa, aorian'ny fanavaozana farany
Ny fanavaozana Firefox farany farany dia mamela antsika hisintona karazana atiny rehetra avy amin'ny Internet mankany amin'ny fitaovantsika ary hanokatra azy io amin'ny fampiharana tadiavintsika.
WhatsApp dia miomana ny handefa ny serivisy fifanakalozana ara-bola amin'ny fomban'ny Apple Pay Cash
Miaraka amin'ny fikasana hanitatra ny Apple Pay Cash, ireo bandy WhatsApp dia miomana amin'ny famoahana ny serivisy fifanakalozana ara-bola eo amin'ireo mpampiasa azy ireo.
Apple dia namoaka ny Beta voalohany an'ny iOS 11.4.1 ho an'ny Developers
24 ora monja taorian'ny nanombohana ny iOS 11.4 miaraka amin'ny AirPlay 2 sy ny Messages ao amin'ny iCloud ho mpilalao fototra, Apple dia nandefa ny beta voalohany an'ny iOS 11.4.1
Ity no sehatra natokana ho an'ny LGTB Pride izay hatombok'i Apple amin'ny Alatsinainy ho avy izao
Apple dia manafina sehatra vaovao ho fahatsiarovana ny reharehan'ny LGTB amin'ilay watchOS 4.3.1 vaovao, ary hanomboka azy amin'ny 4 Jona aorian'ny WWDC Keynote.
Ny fampiharana ofisialy hanaraka ny WWDC 2018 dia efa misy izao
Apple dia namoaka ny fanavaozana ny app WWDC hanaraka ny fampahalalana sy ny fitaovana rehetra amin'ity edisiôna vaovao ity amin'ny fihaonambe fanao isan-taona ho an'ireo mpamorona.
Apple dia mamoaka ny watchOS 4.3.1 manamboatra ny olan'ny paoma rehefa manomboka indray
Toa nanamboatra ny olana nisy teo amin'ny Apple Watch sasany niraikitra tao anaty paoma i Apple rehefa nanangana azy ireo indray
Izahay dia nanandrana ny andiana solomaso iPhone an'ny Sandmarc, nanosika hatramin'ny farany ny fakantsarinay iPhone
Izahay dia mamakafaka ireo andiana solomaso Sandmarc vaovao ho an'ny iPhone X sy iPhone 8, ireo trangan-javatra vaovao hanosika ny fakan-tsary an'ny iDevices hoferana.
Ny iPhone telozoro manaraka manaraka dia hanana asan'ny 3D sy Zoom tsara kokoa
Ny iPhone 2019 dia afaka mampiditra rafitra misy zoro telo izay hanome ny fampiasa 3D fakan-tsary ankoatry ny fanatsarana ny fakana sary miaraka amin'ny zoom ka hatramin'ny 3x.
TSMC manomboka mamokatra ireo chips A12 izay hitondra ireo Apple iPhones vaovao
TSMC dia nanomboka ny famokarana betsaka ireo chips A12 izay hitondra ny Big Apple iPhones manaraka. Ny processeur vaovao dia ho 7 nanometera, izay hamela toerana bebe kokoa ao anatiny sy hampitombo ny herin'ilay fitaovana.
Seattle University dia hanana Apple Store manokana ary mandroso tsara ny fananganana
Sary vaovao navoakan'ny Reddit tamin'ny Internet, mampiseho ny toetran'ny fivarotana vaovao hisokafan'i Apple ao anatiny ...
Ny playlist an'ny Primavera Sound 2018 dia azo alaina ao amin'ny Apple Music ankehitriny
Raha handeha ho any Primavera Sound 2018 ianao dia tsara vintana satria Apple Music dia namorona lisitry ny playlist miaraka amin'ireo hira maro izay hojerena amin'ity herinandro ity any Barcelona.
iOS 12 dia afaka nanitatra ny fahafahan'ny NFC chip an'ny iPhone
Ao amin'ny WWDC dia ho hitantsika ny fampisehoana ny iOS 12. Ny vaovao farany dia milaza fa avelan'i Apple hanitatra ny fampiasana ny chip NFC izay manana terminal be dia be izao hahavita asa bebe kokoa.
Ny Beats Decade Collection, ny Beats vaovao an'ny WWDC 2018, dia voasivana
Andro vitsivitsy talohan'ny keynote fanokafana manaraka an'ny WWDC 2018, ny fitaovana voalohany hatolotr'i Apple dia voasivana: ny Beats Decade Collection vaovao, fanontana manokana an'ny headphones Beats malaza.
Ahoana ny fomba hijerena maimaimpoana ny lalao Champions League (Real Madrid vs Liverpool) amin'ny iPhone-nao
Lazainay aminao ny fomba hijerena ny lalao famaranana ligin'ny UEFA eo amin'ny Real Madrid sy Liverpool. Famaranana hatao amin'ny Sabotsy 26 Mey amin'ny 20:45 alina.
Tetikasa "Star": solosaina misy fakan-tsary sy fikirakirana ARM
Ny tetik'asa miafina nataon'i Apple, antsoina hoe Star, dia naseho, izay mety ho ilay solosaina hybrid noresahintsika nandritra ny volana maro
Snapchat dia mandefa safidy hizara ny toerana misy anao amin'ny fotoana tena izy
Ny safidy hizarana ny toerana misy anao amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny tamba-jotra sosialy Snapchat dia efa misy amin'ny firenena sasany. Amin'ny volana ho avy, ity asa ity dia hitatra ara-jeografika mandra-pahatongany any amin'ny toerana rehetra iasan'ny fampiharana.
Amazon Echo dia manelingelina azy indray, na ny fomba tokony hanjakan'ny fiainana manokana amin'ny zava-drehetra
Amazon Echo dia mamerina izany rehetra izany amin'ny alàlan'ny fampisehoana fa ny tsiambaratelon'ireo mpampiasa azy dia lavitra ny fiheverana ho azo antoka rehefa mandefa resaka tsy misy alalana.
Apple dia nahalala ny olan'ny "Bendgate" sy ny "Touch disease" efa ela talohan'ny nanaiky azy ireo
Ny antontan-taratasin'ny fitoriana an'i Apple momba ny olan'ny "aretina Touch" an'ny iPhone 6 Plus dia mampiseho fa ny orinasa efa nahalala ny olana efa ela talohan'ny nanaiky izany.
Bibikely iray ao amin'ny WhatsApp dia mamela ireo mpifanerasera voasakana hanelingelina anay. Mampiseho anao vahaolana vonjimaika izahay
Ny rindranasan-kafatra hafatra WhatsApp dia manana bibikely amin'ireo mpizara azy izay manakana ny rindranasa tsy ho afaka hanakana tsara ny hafatra rehetra amin'ny fifandraisana voasakana sy tsy afaka mahita ny mombamomba anay sy ny fotoana ifandraisanay farany.
Raha nandoa mihoatra ny Apple ianao amin'ny fanovana ny baterinao dia hamerina anao € 60 i Apple
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia mitady hanohy ny fanasitranana amin'ny fahasalamana amin'ny alàlan'ny famerenana 60 euro amin'ireo olona nanova ny baterin'ny iPhone alohan'ny fihenan'ny vidiny noho ny olan'izy ireo.
Vondronà mpamorona iray no mangataka amin'i Apple ho an'ny App Store tsaratsara kokoa
Vondronà mpamorona miantso ny tenany hoe The Developers Union dia mamporisika an'i Apple hampanantena App Store tsara kokoa ho an'ny tsingerintaona faha-XNUMX.
Animojis dia gaga anay indray tamin'ny fanambarana Apple vaovao
Animojis indray no lakilen'ny fanambarana vaovao an'i Apple. Amin'ity fotoana ity dia miavaka ireo biby vaovao hita ao amin'ny iOS 11.3 ho an'i Korea Atsimo.
Nihodina tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany i Apple tamin'ny fampidirana sary vaovao amin'ny Apple Clips
Toy ny mahazatra amin'ny hetsika avo lenta, manavao ny Apple Clips i Apple amin'ny fampidirana sary ho an'ny Tompondaka Eran-tany amin'ny taona 2018 any Russia.
Sonos dia mandefa andiana fonosana mpandahateny misy fihenam-bidy
Ny orinasa amerikana Sonos dia nandefa andiana fonosana mpandahateny sy vokatra Sonos, izay ahafahantsika mahazo fihenam-bidy mahaliana.
Apple Manamafy ny hetsika WWDC 2018 amin'ny 4 Jona amin'ny 19:00 PM
Apple dia nandefa ny fanasana tamin'ny mpanao gazety manamafy ny hetsika voalohany WWDC 2018 ho an'ny 4 Jona ho avy izao amin'ny 10:00 ora eo an-toerana, amin'ny 19:00 ora Espaniola.
Ny Google Home sy Google Home Mini dia ho tonga any Espana amin'ny volana Jona
Mpikabary marani-tsaina an'i Google, ny Google Home dia ho tonga any Espana ihany amin'ny faran'ny volana Jona, miaraka amin'ny Google Home Mini
Apple dia afaka nanangana ny Apple Glasses tamin'ny 2021
Ny paoma lehibe dia mety mikasa ny hamoahana solomaso virtoaly virtoaly izay hantsoiny hoe Apple Glasses amin'ny 2021. Na dia avo aza ny vidiny, tombony lehibe no andrasana amin'ny taona voalohany amin'ny varotra.
PUBG Mobile mahatratra 10 tapitrisa mpampiasa mavitrika
Nanjary iray amin'ireo lalao alaina indrindra amin'ny tantara ny PUBG ary efa manana mpampiasa mavitrika 10 tapitrisa isan'andro.
Ny lazan'ny Apple any Sina dia laharana faha-XNUMX an'ny orinasa
Ny orinasan-tserasera Cupertino dia manohy manatsara ny lazany eo amin'ny firenena na eo aza ny olana sy ny fanakantsakanana ataon'ny governemanta Shinoa.
Apple dia afaka nandefa kinova HomePod tsy misy Siri sy ambanin'ny marika Beats
Araka ny tsaho farany nivoaka avy amin'ny rojom-pamokarana sinoa isan-karazany, Apple dia mety niasa tamin'ny mpandahateny tsy manam-pahaizana izay hanomboka eo ambanin'ny marika Beats.
Ny HUD azo ovaina dia tonga amin'ny fanavaozana vaovao an'ny Fortnite ho an'ny iOS
Manaraka ny fangatahan'ny mpampiasa, ireo tovolahy avy amin'ny Epic Games dia manampy ny fahaizana manamboatra ny Fortnite HUD ao amin'ny kinova Fortnite ho an'ny iOS.
Manatevin-daharana ny fety ny YouTube ary mandefa serivisy mozika mivantana ho azy
Abidia dia te hamerina amin'ny fomba famolavolana ny serivisy. Noho io antony io dia nandefa Youtube Music, serivisy mozika streaming vaovao miaraka amina kinova maimaimpoana miaraka amin'ny doka, ary kinova premium misy ny $ 9,99 isam-bolana.
Samsung dia hampandroso ny fanombohana ny Note 9 sy ny Galaxy S10 noho ny faharatsian'ny fivarotana ny S9
Mivoaka ny vaovao fa afaka mampandroso ny famoahana ny Samsung Note 9 sy ny Samsung Galaxy S10 ny tovolahy ao Samsung noho ny faharatsian'ny fivarotana ny S9.
PayPal dia hividy ny iZettle soedoà amin'ny vidiny 2.200 tapitrisa dolara
Toa tsy misy te ho tavela amin'ny fomba fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny fitaovana finday ary na dia ...
Tidal, mpifaninana amin'i Apple Music, eo amin'ny sain'ny fisandohana data
Ny serivisy mozika streaming, Tidal, dia voarohirohy amin'ny resabe mifandraika amin'ny angon-drakitra momba ny isan'ny fanaingoana omeny ny artista.
Doka vaovao mahonena nataon'i Samsung izay manandrana mihomehy an'i Apple
Samsung dia manolotra ny fanambarana vaovao momba ny Galaxy S9 izay tsy maintsy hampiasa iPhone 6 efa ho efa-taona izao mba hahafahany manandratra ny hatsaram-panahin'ny Galaxy S9
Miaraka amin'ny fanovana manaraka ho an'ny WhatsApp, raha miala amin'ny vondrona WhatsApp ianao dia tsy ho afaka hanampy anao intsony izy ireo
Toa nanomboka nahita ny maha-zava-dehibe ny vondrona ho an'ny olona marobe ny WhatsApp, ary ny fanavaozana ny ho avy dia hanomboka hanampy ny sasany amin'ireo andraikitra efa misy ao amin'ny Telegram hanatsarana ny fitantanana sy ny asany.
OnePlus Bullets Wireless, headphone Bluetooth avy amin'ny orinasa misy "bandit" mankany Apple
OnePlus dia nanolotra ny headphones Bluetooth vaovao. Natao Batemy ho OnePlus Bullets Wireless izy ireo ary manazava ny fomba mandritra ny famelabelarana dia miresaka momba an'i Apple ny mpiara-manorina
Ny ady eo amin'i Apple sy Samsung handika ny endrik'ilay iPhone dia miverina
Tantara lava ity ary ho fantatry ny veteran'ilay toerana fa eo anelanelan'ny orinasa Cupertino, Apple sy ...
North Carolina dia afaka nampiantrano campus Apple vaovao
Apple dia mieritreritra ny hanangana campus vaovao, aorian'ny fananganana lehibe ny Apple Park. Ny tsaho dia milaza fa i North Carolina, indrindra ny Research Triangle Park, dia mety ho toerana iray ankafizin'ny Big Apple.
Apple dia nanampy banky vaovao 30 mifanaraka amin'ny Apple Pay any Etazonia
Ny isan'ny banky sy ny andrim-panjakana mpampindram-bola mifanaraka amin'ny Apple Pay any Etazonia dia nitombo isa indray. Amin'ity fotoana ity, vaovao 30 no nampiana.
Microsoft dia te handefa Surface vaovao misy vidiny ambany hifaninana amin'ny iPad 349 €
Ireo lehilahy avy any Bloomberg dia namoaka ny vaovao fa hieritreritra momba ny fananganana Surface mora vidy vaovao i Microsoft mba hifaninana tanteraka amin'ny iPad vaovao amin'ny taona 2018.
Apple dia nahazo loka ho an'ny Indostria ho an'ny fampisehoana iPhone X sy iPad Pro
Apple dia nahazo loka roa ho an'ny fampisehoana amin'ny iPhone X sy iPad 10,5-inch iPad Pro amin'ny fampiasana teknolojia vaovao.
Ny totalin'ny fiara mizaka tena amin'ny anaran'i Apple dia miakatra hatramin'ny 55 unit
Mazava daholo isika fa Apple dia manana rafitra mitondra fiara mahaleo tena eo am-pelatanany ary manohy manatsara sy manatsara ny ...
Canal + France dia manolotra ny mpampiasa azy ny Apple TV 4k fa tsy ny decoder mahazatra
Apple sy Canal + France dia nifanaraka tamin'ny serivisy tariby Canal + hanolotra ny Apple TV ho fitaovana hankafizany ny fandaharana amin'ity serivisy tariby ity amin'ny alàlan'ny fampiharana azy manokana.
Spigen dia manome voninahitra an'i Apple classics amin'ireo tranga vaovao ireo
Spigen dia nanambara ny tranga vaovao mampatsiahy ny sary masina iMac sy iPhone am-boalohany, azo vidiana izao
Apple dia mandefa ny Betas 5 an'ny iOS 11.4 sy ny sisa amin'ireo rafitra
Apple dia namoaka ny iOS 11.4 Beta 5 miaraka amin'ireo ambiny kinova ho an'ireo sehatra hafa eo amin'ny tontolo iainana izay efa misy ho an'ireo mpamorona.
Ny fampiasana ny iPad amin'ny orinasa mpanao trano iray dia mitahiry $ 1,8 tapitrisa
Ny orinasam-pananganana amerikana dia nanambara fa hatramin'ny nandraisany ny iPad teo amin'ny toerana fananganana dia 1,8 tapitrisa dolara isan-taona ny tahirimbola mifandraika amin'izany.
Niantic mikasa ny hamorona sarintany misy zava-misy nampitomboina noho ny mpampiasa Pokémon GO
John Hanke, tale jeneralin'ny Niantic amin'izao fotoana izao, dia nanome toky fa amin'ny ho avy dia hamboarina ny sarintany mitombo miaraka amin'ny fanampian'ny mpilalao Pokémon GO. Ary koa, ity sarintany ity dia ho azon'ny mpamorona antoko fahatelo.
Eddy Cue dia mivarotra ny tranony fialan-tsasatra mahafinaritra $ 12 tapitrisa
12 tapitrisa dolara no angatahin'i Eddy Cue ho an'ny trano fivarotany any California. Ireo efitrano dia misy efitrano fatoriana 5 sy efitra fandroana 6, ary koa toerana fialamboly marobe.
Amin'ny krizy finday avo lenta ... mijanona ho marin-toerana ny iPhone X
Any Eropa dia misy krizy amin'ny fivarotana finday avo lenta avo lenta. Apple dia nandatsaka ny isan'ny fandefasana entana natao tamin'ity Q1 ity, saingy ny iPhone X dia mijanona amin'ny 25% ny entana novokarin'i Apple.
Apple dia hanatsara ny Apple Maps miaraka amin'ny drôna
Apple dia mikasa ny hampiasa drôna hanatsarana ny sari-taniny, Apple Maps. Hanomboka hampiasa drôna any North Carolina, Etazonia ny hetsika.
Misy dikany ve ny manomboka mivarotra tranga iPhone SE 2018? Tsia mazava ho azy.
Na dia tsy fantany akory aza ny volavola sy ny endri-javatra amin'ilay iPhone SE 2018 vaovao, Olixar sy MobileFun dia nanao traikefa nahafinaritra ary nanomboka nivarotra ny tranga voalohany ho an'ity fitaovana ity izay mbola tsy natolotra.
Apple dia manolotra firenena sasany ny vanim-potoana voalohany amin'ny Carpool Karaoke maimaim-poana
Ny fampiharana TV dia fampiharana izay ananan'ny firenena sasany amin'ny iDevices hitantanany ny serivisy fandefasana azy. Androany i Apple dia nampiditra ny andiany voalohany amin'ny andiany Carpool Karaoke maimaimpoana.
Danemark, Suède, India ary Taiwan dia mahazo Apple Watch Series 3 LTE
Firenena vaovao no nahazo ny Apple Watch Series 3. Androany ireo mpampiasa nitahiry izany tamin'ny 4 Mey dia afaka mankany amin'ny magazay haka azy io sy ireo antoko liana vaovao hividy azy.
Apple dia manamboatra làlana mankany amin'ny fomba fanariana aluminium alim-emission revolisionera
Ny fanoloran-tenan'i Apple amin'ny tontolo iainana dia tena zava-dehibe ary ireo taona maro dia mahita hetsika lehibe ao ...
Miitomo manao veloma tokoa
Ny lalao Nintendo voalohany tamin'ny sehatra finday vao avy nanao veloma farany noho ny fahombiazana kely nananany, tao anatin'ny roa taona lasa izay taorian'ny nanombohany.
Manomboka manaisotra ny fampiharana fizarana toerana i Apple raha tsy mahazo alalana avy amin'ny mpampiasa
Mampitandrina ireo mpamorona manana apps i Apple fa esorina ao amin'ny App Store ny fampiharana azy ireo rehefa mizara vaovao amin'ny antoko fahatelo, toa ny toerana, izy ireo hanesorana kaody manimba.
Apple dia afaka manana carte de crédit manokana ho an'ny taona 2019
Apple dia mety nifampiraharaha tamin'ny Goldman Sachs handefa ny carte de crédit azy manokana hampiasana amin'ny Apple Pay amin'ny findainy.
Tsaho momba ny iPhone SE 2 miaraka amina endrika mitovy amin'ny iPhone X miverina noho ny fivoahan'ny kojakoja sasany
Herinandro vitsivitsy talohan'ny WWDC fanokafana Keynote voalohany, tsaho momba ny iPhone SE 2 vaovao miaraka amin'ny efijery mitovy amin'ny an'ny iPhone X dia miverina noho ny fivoahan'ny kojakoja ho azy.
Apple dia hivarotra famandrihana amin'ny serivisy mivantana amin'ny alàlan'ny fampiharana TV
Manomboka amin'ny herintaona, araka ny tsaho farany, Apple dia afaka nanomboka nampiroborobo ny tolotra horonantsary mivantana tamin'ny alàlan'ny fampiharana TV
Apple manafoana ny tetikasa foibe angon-drakitra vaovao any Irlandy
Taorian'ny nahazoany ny loharanom-pahalalana rehetra nanohitra ny fananganana ivon-kevitra iray any Atherny, Irlandy, dia nanapa-kevitra ny hanafoana tanteraka ilay tetikasa i Apple, noho ny fitarainana vaovao teo amin'ny tribonaly eropeana.
Ireo no zava-baovao ateraky ny Android P, ary tiako hasiana izany ao amin'ny iOS 12
Android P dia misy fanovana vitsivitsy izay tsy mamaky tany loatra fa manatsara ny traikefan'ny mpampiasa ary maro amintsika no hanao sonia ny iOS 12
Podcast 9 × 31: Tonga eo ankavanany i Siri
Taorian'ny hetsika somary voafongotra nataon'i Google izay tsy nisy vaovao lehibe hanasongadinana ao anatin'ny ...
Nisy hacker sinoa nahavita nametraka an'i Cydia tamin'ny iPhone niaraka tamin'ny iOS 11.3
Ming Zhen dia nahavita nametraka an'i Cydia tao amin'ny iOS 11.3 na izay mitovy: nigadra ny kinovan'ny iOS izay nanjakan'ny fitrandrahana sasany nikatonan'ny Apple tao amin'ny iOS 11.3.1.
Mampianatra anay Mpanampy Google i Google ary tsy izany rehetra izany Siri
Google Assistant dia mihatsara be amin'ny vaovao atolotra ao amin'ny Google I / O, ahafahantsika miresaka momba ny mpanampy voalohany izay tena azo raisina ho toy izany.
Doka "Barbers" an'ny Apple, nomena tamin'ny loka Art Directors Club
Rehefa miresaka momba ny fanambaràn'i Apple isika dia efa fantatsika fa karakaraina amin'ny antsipiriany izy ireo ary afaka milaza isika fa kely ...
Notsapainay ny InstaWrist, ny fiverenan'ny Instagram amin'ny Apple Watch
Famerenana ny rindrambaiko InstaWrist, fampiharana izay mamerina ny feed Instagram amin'ny Apple Watch antsika, mety hijanona ny fanohanan'ny Instagram tamin'ny fanavaozana taloha.
iOS 11.4 dia hanakana ny fampiasana ny GrayKey Box afaka 7 andro
Miaraka amin'ny famoahana ny kinova iOS 11.4 manaraka, Apple dia hampiditra fiasa vaovao hanakana ny seranan-tseraseran'ny fitaovana miaraka amin'ilay kinovan'ny iOS, rehefa tsy novohana ny terminal tao anatin'ny herinandro.
Apple Watch boribory? Ity patanty Apple ity dia ahafahanao mahita topy maso
Patanty vaovao avy any Apple no mamela ny varavarana misokatra ho amin'ny alàlan'ny Apple Watch boribory amin'ny ho avy
Tsy ela dia tonga tao amin'ny Twitter ireo hafatra mivantana nafarana
Twitter dia mety manandrana fiasa vaovao ahafahana mamorona hafatra mivantana voaaro amin'ny tambajotran-tseraserany, amin'izay dia mampitombo ny fiarovana ny fampahalalana eo amin'ny samy mpampiasa.
Tsy ho ela ny Instagram dia mamela ny manampy mozika amin'ny tantara
Ny kaody ny fampiharana beta Instagram dia mampiseho amintsika fa tsy ho ela dia hahita fiasa vaovao ahafahanay manampy mozika amin'ny tantarantsika.